Wall Charger - Earldom
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ Wall Charger.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် Earldom.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် Earldom.
ထုတ်ကုန်အလွန်အကျွံအပူစုဆောင်းမထားဘူး။ ၎င်းတွင်ထုတ်လုပ်သောအပူကိုစုပ်ယူနိုင်သည့်ရေဒီယိုတွင်ရေဒီယိုရှိသည့်ရေဒီယိုတွင်ပတ်0န်းကျင်ပတ်0န်းကျင်သို့ထိရောက်စွာပျံ့နှံ့စေနိုင်သည်။.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ရည်ရွယ်သည် Wall Charger.ကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်ဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခွင့်များကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်။
Earldom 15W Wireless Charger Carry Carry Carry Qi Induction Sendoor အမြန်နှုန်းကို Samsung iPhone 12 11
Earldom ၏အကောင်းဆုံး Earldom 15W Wireless Charge Carress Carress Carress Carress Carress Carress Carred Mount Samsung iPhone 12 11 စက်ရုံစျေးနှုန်း - Earldom, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စျေးနှုန်းက0င်ရိုးရာရေနံကာများကိုပေးနိုင်သည်။
Earldom ဗီယက်နမ်အေးဂျင့် 4-20
Earldom အကောင်းဆုံး Earldom ကင်မရာ tripod ခရီးသွား Monopod (လူမီနီယမ် Professional ကဗီဒီယိုကင်မရာကိုတောင်ကိုခြေထောက်နဲ့) Flexible ဌာနမှူးကုမ္ပဏီနှင့်အတူ Adjustments ရပ် - Earldom, အမျိုးမျိုးကွဲပြားထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်န်ဆောင်မှုများပေးရန်။ဖောက်သည် market.Earldom အတွက်အဆင်ပြေချောမွေ့, လျှောက်လွှာနှင့်စိတ်ကြိုက်န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူတွေ့ကြံဖောက်သည် satifications တို့အားဤသို့သောအလူမီနီယံအလွိုင်းပိုက် fittings, ပိုကောင်းကို ABS ပေါ်လီမာပစ္စည်းများ, နှင့်တင်းကျပ်ပစ္စည်းအရည်အသွေးသည်စစ်ဆေးခြင်းအဖြစ်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများ, အသုံးပြု tripod ကုမ္ပဏီများ, တည်ငြိမ်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုရှိ အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ, ဒီဇိုင်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာ။
Earldom Cellphone မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းထိတွေ့မျက်နှာပြင်အိတ်ရေကူးဖုန်းများ TPU ရေစိုခံအိတ်မိန်းကလေးများ
Earldom Professional Earldom Cellphone မိုဘိုင်းဖုန်း Touch Screen Bag ရေကူးစက်များ TPU ရေစိုခံအိတ်မိန်းကလေးများထုတ်လုပ်သူများ,
TWS BT 5.0 Speakers အိတ်ဆောင်ကြိုးမဲ့ 3D စတီရီယိုအသံနှစ်ချက်ခရာဘေ့အဆောက်အဦးအပြင်ရေဒီယိုနာယကပံ့ပိုးမှု BT TF Card ကို FM ရေ AU
TWS BT 5.0 Speakers အိတ်ဆောင်ကြိုးမဲ့ 3D စတီရီယိုအသံနှစ်ချက်ခရာဘေ့အဆောက်အဦးအပြင်ရေဒီယိုနာယကပံ့ပိုးမှု BT TF Card ကို FM ရေ aux